Akanjo frantsay | Vaovao momba ny dia
Tsy manana fomba tokana an-tanàn-dehibe i Frantsa ankehitriny, na dia azo lazaina ho vitsivitsy amin'ny antsipiriany aza izy io izay mampiavaka ny fikatsahana fomba mandeha eo anelanelan'ny bohemian sy ny kanto, izay hita ihany koa amin'ny maro aminy ny ankamaroan'ny arabe solontena, satria izy mampiavaka ny maro amin'ireo tanànany.
Raha miverina kely kokoa isika, dia nentim-paharazana dia matetika miresaka momba ny fisian'ny akanjo na lahy na vavy ary raha izany zipo lava raha ho an'ny lehilahy kosa ny fisian'ny pataloha sy lobaka Niaraka tamin'i akanjo na palitao ary a sombrero.
Resahina matetika koa io fitafiana aristokraty mihaja izay natolotra nandritra ny vanim-potoana monarka frantsay, izay be loatra noho ny baroque loatra noho ny habetsaky ny antsipiriany sy ny fampiasana ireo lamba sy landy faran'izay kanto indrindra hahatratrarana ny tanjona tadiavina.
Ny vehivavy aristokraty dia matetika ny zipo landy voangona, voaravaka kofehy volamena. Natao palitao koa ny palitao.
Ny vehivavy antonony antonony dia nanao akanjo tery tery iray niaraka tamin'ny tanany.
Hatramin'ny taloha ka hatramin'izao, ny scarf izay miendrika sosona dia ao anatin'ny lamaody frantsay.
Photo: Ny morontsiraka
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » kolontsaina » Akanjo frantsay
Paragliding: Adventure Sport izay ahafahantsika manidina
Teatra romana manan-danja